समलिङ्गी, तेस्रोलिङ्गी... यसरी बुझौं र बुझाऊँ
वैशाख १, २०७६ | माधव दुलाल
रामेछापको एक विद्यालयमा कक्षा-६ को स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षाको कक्षा चलिरहेको छ । किताबको ३६औं र ३७औं पेजमा दिइएको किशोरावस्थामा हुने सामाजिक परिवर्तन र यौनिकताका विषयमा शिक्षक मीरा केसी कक्षा लिइरहेकी छन् ।
पुस्तकमा लेखिएको ‘विपरीतलिङ्गी वा समलिङ्गीप्रति आकर्षण’ भन्ने बुँदा पढेर विद्यार्थीलाई सुनाउँदै केसीले सक्दो व्याख्या गरेर बुझाउने प्रयत्न गरिन् । कक्षामा पढाउँदा उनले ‘समलिङ्गी’ र ‘तेस्रोलिङ्गी’ शब्द धेरै पटक प्रयोग गरिन् । अन्तमा विद्यार्थीले बुझे/नबुझेको सोधिन् तर कुनै विद्यार्थीले पनि बुझेको प्रतिक्रिया दिएनन् ।
कक्षा सकिएपछि समलिङ्गी र तेस्रोलिङ्गीका बारेमा पढाउँदाको अनुभव बताउन आग्रह गर्दा शिक्षक मीराले भनिन्, “यस्ता विषयमा हामी आफैंले राम्ररी बुझने मौका पाएका छैनौं, अनि विद्यार्थीलाई कसरी बुझउनु ? निकै गाह्रो पर्छ ।”
विद्यालयको निमावि–मावि तहका अधिकांश विद्यार्थीले किशोरावस्थामा पुगेपछि कुनै पनि व्यक्ति सामान्यतया विपरीतलिङ्गी अर्थात् केटा भए केटीप्रति र केटी भए केटाप्रति आकर्षित हन्छन् भन्ने बुझेका हुन्छन् । तर, समलिङ्गी सम्बन्धका विषयमा उनीहरूले खासै बुझेका हुँदैनन्, र यसबारे कसैले बताउँदा पनि अनौठो मान्छन् । किनभने, यस्ता विषयमा पर्याप्त जानकारी न किताबमा छ, न त शिक्षकले नै दिन सक्छन् ।
परापूर्वकालदेखि नै समाजले पुरुष र महिलालाई आपसमा विवाह गरेर गृहस्थ जीवन बिताउने भूमिका दियो। तर तेस्रोलिङ्गीहरूबाट समाजले त्यस्तो अपेक्षा राखेन। उनीहरूलाई शृङ्गार, नृत्य, कला, सजावट तथा चाडपर्व र मेला–उत्सवमा मनोरञ्जन दिलाउने, उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने र राजकाजमा सल्लाह दिने भूमिका दिइन्थ्यो ।
ललितपुरको पाटनस्थित प्रभात उच्च माविमा २० वर्ष स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षा पढाएर दुई महीनाअघि मात्रै अवकाश पाएकी शिक्षक नानीचुरी बज्राचार्य पनि यस्ता विषयमा आफू अनभिज्ञ रहेको बताउँछिन् । मीरा र नानीचुरीले देशभरका त्यस्ता अधिकांश शिक्षकहरूको प्रतिनिधि गर्छन् जसले समलिङ्गी र तेस्रोलिङ्गीबारे पढाउँदा पुस्तक वाचन गरेर विद्यार्थीलाई सुनाउन त सक्छन् तर अर्थ बुझाउन सक्दैनन् । लैंगिक रूपमा स्त्री र पुरुषलाई मात्र चिनेका प्रायः शिक्षकहरू ‘समलिङ्गी’ ‘द्विलिङ्गी’ र ‘तेस्रोलिङ्गी’ भन्ने शब्द सुन्दा पनि अनौठो मान्छन् । तर; विपरीतलिङ्गीप्रति आकर्षित हुने महिला र पुरुष बाहेक लैङ्गिक रूपले आफूजस्तै अर्को व्यक्तिप्रति यौनाकर्षित हुने समलिङ्गी तथा यी सबैभन्दा फरक तेस्रोलिङ्गी, द्विलिङ्गी र अन्तरलिङ्गी समुदाय पनि समाजमा चिनिनका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् ।
जहाँतहींको मानव समाजमा विपरीतलिङ्गीसँग यौन सम्बन्ध राख्न चाहने महिला र पुरुषको संख्या अत्यधिक हुन्छ । उनीहरूको ठूलो संख्याका बीच अल्प अर्थात् थोरै संख्याका त्यस्ता मानिस पनि हुन्छन् जो लैंगिक तथा यौनिक रूपमा बहुसंख्यक भन्दा फरक हुन्छन् । विभिन्न पाँच किसिमका त्यस्ता मानिसहरूको समूहलाई ‘लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक’ भनेर सम्बोधन गर्ने गरिएको छ । अंग्रेजीमा ती प्रत्येकको पहिचान जनाउने शब्दको पहिलो अक्षर जम्मा गरेर संक्षिप्त रूपमा ‘एलजीबीटीआई’ (LGBTI) भन्ने चलन छ । यिनको परिचय यस्तो छः
L अर्थात् Lesbian (महिला समलिङ्गी): यी त्यस्ता अल्पसंख्यक हुन् जो लैंगिक रुपले महिला हुन् तर उनीहरूमा महिलालाई नै यौनसाथी बनाउने चाहना हुन्छ । यस्ता महिला यौनका लागि पुरुषप्रति कहिल्यै आकर्षित हुँदैनन् । नेपालमा समलिङ्गी महिलाको संख्या निकै ठूलो रहेको त्यस सम्बन्धी अध्ययन गर्नेहरूको दाबी छ । हाल बंगलादेशका समलिङ्गी तथा तेस्रोलिङ्गीबारे अध्ययन गरिरहेकी मकवानपुरकी अपेक्षा दाहाल (तस्वीरमा) तिनैमध्येकी एक हुन् ।
G अर्थात् Gay (पुरुष समलिङ्गी): यो समूहमा पर्ने व्यक्तिको पहिचान पूर्ण रूपले पुरुष नै हुन्छ तर उनीहरूमा महिला यौनसाथी बनाउने चाहना कत्ति पनि हुँदैन । आफूजस्तै अर्को पुरुषसँग आकर्षित हुने यौन स्वभाव उनीहरूमा हुन्छ । नेपालमा समलिङ्गी र तेस्रोलिङ्गीको पहिचान सहित सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक अधिकारका लागि खुलेर आवाज उठाउने पहिलो व्यक्ति सुनिलबाबु पन्त समलिङ्गी पुरुष हुन् । २०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा उनी तत्कालीन नेकपा (संयुक्त) का तर्फबाट समानुपातिक सीटमा निर्वाचित सभासद समेत भएका थिए । पन्त आफ्नो यौनिक पहिचान खुलाउने एशियाकै पहिलो समलिङ्गी विधायक समेत भएका थिए ।
B अर्थात् Bisexual (द्विलिङ्गी): कतिपय महिला र पुरुषहरू त्यस्ता हुन्छन् जो यौनका लागि समानलिङ्गी र विपरीतलिङ्गी दुवैप्रति आकर्षित हुन्छन् । शरीरका यौनग्रन्थीले निकाल्ने हर्मोनले नै उनीहरूलाई त्यस्तो बनाएको हुन्छ । यस समूहका यौनिक अल्पसंख्यकहरू कुनैबेला समलिङ्गी जस्तो र कुनैबेला विपरीतलिङ्गी जस्तो यौन व्यवहार देखाउँछन् । त्यसकारण नै उनीहरूलाई द्विलिङ्गी भनिएको हो । धेरैले उनीहरूमा महिला र पुरुष दुवैका यौनाङ्ग हुन्छन् भनेर बुझने गरेता पनि त्यो सत्य होइन । स्त्री र पुरुष दुवैसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्ने स्वभावका महिला वा पुरुष जो पनि यसभित्र पर्दछन् । नेपालका एक तेक्वान्दो खेलाडी नवराज कार्कीले आफूलाई द्विलिङ्गीका रूपमा चिनाएका छन् ।
T अर्थात् Transgender (तेस्रोलिङ्गी): बहुसंख्यक विपरीतलिङ्गी समुदायमा सबैभन्दा भ्रमपूर्ण बुझाइ रहेको लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समूह यही हो । तेस्रोलिङ्गीलाई अधिकांश मानिसहरू न महिला, न पुरुष अर्थात् नपुंसकलिङ्गी ठान्दछन् जुन बुझाइ पूर्ण रूपले गलत हो । यो समूहका व्यक्तिहरू महिला र पुरुषभन्दा फरक लिङ्गका भएर तिनलाई तेस्रोलिङ्गी भनिएको होइन । बरु महिला र पुरुष दुवै लिङ्गको संगम उनीहरूमा पाइन्छ । त्यो कसरी भने तेस्रोलिङ्गीहरूमध्ये एकथरी जैविक रूपमा महिला भइकन शारीरिक लवज, हाउभाउ तथा सामाजिक भूमिकामा पुरुष जस्ता देखिन्छन् भने अर्काथरीले चाहिं पुरुष जननेन्द्रिय लिएर जन्मेता पनि हाउभाउ, कटाक्ष, स्वभाव र व्यवहार सबै महिलाको जस्तो देखाउँछन् । अर्थात् जन्मँदा पुरुष शरीर भए पनि महिला जस्तो भई हुर्कन/बाँच्न चाहने र जन्मँदा महिला शरीर पाए पनि पुरुष बनेर जिउन चाहने जति सबै तेस्रोलिङ्गी हुन् ।
नेपालमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको संख्याबारे यकिन तथ्याङ्क अहिलेसम्म छैन । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ सम्म यो समुदायका व्यक्तिको गणना नगरी महिला र पुरुषको मात्र संख्या लिइएको थियो । अबको तीन वर्षपछि २०७८ मा हुने राष्ट्रिय जनगणनाले यो समुदायका व्यक्तिको गणना गरे मात्रै आधिकारिक तथ्याङ्क आउनेछ । समलिङ्गी तथा तेस्रोलिङ्गीहरूमध्ये तेस्रोलिङ्गी समुदायलाई सहजै चिन्न सकिए पनि समलिङ्गी र द्विलिङ्गीलाई उनीहरू स्वयंले नचिनाएसम्म अरूले चिन्न सक्दैनन् । किनभने शारीरिक रूपमा आम महिला र पुरुष जस्तै देखिने उनीहरूको यौन व्यवहार मात्र फरक हुन्छ ।
शारीरिक रूपमा महिला भए पनि आफ्नो रोजाइले पुरुष जस्तो भएकाहरूलाई तेस्रोलिङ्गी पुरुष र पुरुष शरीरमा जन्मेर महिलाको जीवन बाँच्न चाहनेहरूलाई तेस्रोलिङ्गी महिला भनिन्छ । लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको संस्था नील हीरा समाजकी वर्तमान अध्यक्ष पिंकी गुरुङ (तस्वीरमा) तेस्रोलिङ्गी महिला हुन् । जैविक रूपमा पुरुष यौनाङ्ग भए पनि लैंगिक भूमिका र पहिचानले उनी महिला हुन् । त्यसैगरी शरीरमा स्त्री यौनाङ्ग भए पनि भक्ति शाह सामाजिक रूपमा तेस्रोलिङ्गी पुरुष हुन् । उनी नेपाल पत्रकार महासंघ, ललितपुर जिल्ला शाखाको सदस्य समेत छन् ।
तेस्रोलिङ्गी व्यक्तिहरूको चालढाल र जीवनशैली सँगै यौन स्वभाव पनि जैविक शरीरको भन्दा विपरीत हुन्छ । यसको तात्पर्य हो, तेस्रोलिङ्गी पुरुषले महिला र तेस्रोलिङ्गी महिलाले पुरुषलाई यौनसाथीका रूपमा रोज्छन् । उनीहरूको यौनाङ्ग पनि आफ्नो यौनसाथीकै जस्तो हुन्छ । आधुनिक विज्ञानले पुरुषबाट महिला र महिलाबाट पुरुष बन्न चाहनेहरूलाई विशेष किसिमको शल्यक्रिया गरेर शारीरिक रूपमै लिङ्ग परिवर्तन गर्ने सुविधा दिन थालेको छ ।
त्यसरी लिङ्ग बदलेर पुरुषबाट महिला र महिलाबाट पुरुष भएकाहरू नेपालमा पनि एक दर्जनको हाराहारीमा छन् । हास्यकलाकार सन्तोष पन्तको छोरा प्रतीकबाट छोरी बनेकी केट्लिन पन्त त्यसको उदाहरण हुन् । पुलिङ्गीबाट स्त्रीलिङ्गी भएपछि उनले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्त्रीलिङ्गी पहिचानमा नागरिकता समेत लिएकी छन् । यसरी लिङ्ग बदलेका व्यक्तिलाई ‘ट्रान्सजेन्डर’ (Transgender) होइन, ‘ट्रान्ससेक्सुअल’ (Transsexual) भन्ने गरिन्छ । यद्यपि नेपालीमा यी दुवैलाई बुझउन ‘तेस्रोलिङ्गी’ शब्द नै प्रचलित छ । नेपालमा तेस्रोलिङ्गीलाई परम्परादेखि नै भूगोल अनुसार भिन्नाभिन्नै संज्ञा दिइएको पाइन्छ । पूर्वी नेपालमा उनीहरूलाई जनाउन मेटी शब्द प्रचलित छ । पश्चिम पहाडतिर सिंगारु भनिने तेस्रोलिङ्गीलाई तराईतिर मौगिया वा कोथी र हिमाली भेगमा फुलुमुलु भनिन्छ ।
कतिपयले समलिङ्गी र तेस्रोलिंगी हुनुलाई मानसिक रोगका रूपमा बुझदछन् । सन् १९९० अघि समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गीपनलाई मानसिक रोगकै सूचीमा राखिएको थियो । तर, १९९० को मे १७ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसलाई कुनै मानसिक रोग नभई प्राकृतिक मानवीय स्वभाव हो भनेर घोषणा ग र्‍यो । त्यसपछि नेपालका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूले हरेक वर्षको मे १७ लाई समलिङ्गी तथा तेस्रोलिङ्गीप्रति गरिने घृणा विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउँदै आएका छन् । विज्ञानले पनि समलिङ्गी र तेस्रोलिङ्गीपनलाई मानिसको स्वाभाविक प्राकृतिक विशेषता मानिसकेको छ । यस विपरीत महिला र पुरुषका बीच मात्र यौन आकर्षण हुनुपर्छ र यो नै प्राकृतिक नियम हो भनी समाजका कतिपय मानिसले राख्दै आएको परम्परागत मान्यता अब पुरातन सावित भएको छ ।
I अर्थात् Intersexual (अन्तरलिङ्गी): एउटै शरीरमा स्त्री र पुरुष दुवैका यौनाङ्ग अथवा स्त्री र पुरुष नछुट्टिने गरी अस्पष्ट किसिमले बनेको यौनाङ्ग लिएर जन्मेका व्यक्तिहरू अन्तरलिङ्गी हुन् । ललितपुर इमाडोल निवासी कुसुम विष्ट यसको उदाहरण हुन् । हाल नील हीरा समाजमा कार्यरत विष्टको शारीरिक रूपमा स्त्री र पुरुष दुवैका यौनाङ्गसहित जन्म भएको थियो ।
कतिपय परिवारमा महिला र पुरुष दुवैको यौनाङ्ग सहित जन्मेका अन्तरलिङ्गी बच्चालाई बाबुआमाको रोजाइमा स्त्री या पुरुषमध्ये कुनै एक अंग राखेर अर्को अंग शल्यक्रियाबाट हटाउने प्रचलन पनि छ । तर त्यसो गर्नु शारीरिक स्वास्थ्यका लागि युक्तिसंगत र बच्चाले यौवनावस्थामा पुगेपछि पहिल्याउने आफ्नो यौन पहिचानका लागि न्यायोचित मानिंदैन । त्यस्ता बच्चामध्ये कतिपयको लैंगिक तथा यौनिक पहिचान महिला वा पुरुष के हो भन्ने कुरा बच्चा हुर्किएर यौवनावस्थामा पुगेपछि स्वयंलाई मात्र थाहा हुन्छ । अझ् कतिपय अन्तरलिङ्गी बच्चाहरू त यस्ता पनि जन्मिन्छन् जसको लैंगिक पहिचान जीवनभर उनीहरू आफैंले समेत निक्र्योल गर्न सक्दैनन् । त्यसकारण लिङ्ग नछुट्टिने गरी जन्मिएका र महिला वा पुरुष दुवै हुनसक्ने सम्भावना लिएर जन्मिएका अन्तरलिङ्गी बच्चाहरूको चिकित्सा शल्यक्रियाबाट लिङ्ग निर्धारण गरिदिने हतार कसैले भुलेर पनि गर्नुहुँदैन ।
समलिङ्गी यौन सम्बन्धका विषयमा पनि संकुचित हुनु जरूरी छैन । पुरुषले पुरुषसँग र महिलाले महिलासँग शारीरिक सम्बन्ध राख्ने व्यक्तिको इच्छा उसको शरीरमा उत्पन्न हुने हर्मोनको प्रभाव हो । शरीरका अंग र समाजले राख्ने अपेक्षासँग यसको कुनै सम्बन्ध हुँदैन । कस्तो यौन जीवन बाँच्ने भन्ने कुरा व्यक्तिको निजी छनोटमा भर पर्छ ।
व्यक्तिमा यौनइच्छा कम भएर देखिने नपुंसकता चाहिं स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय हो । यस्ता समस्याको औषधिउपचार छ । तर तेस्रोलिङ्गी बन्नु नपुंसक हुनु होइन र यो उपचार गरेर बदल्न मिल्ने अवस्था पनि होइन । व्यक्तिका यौनग्रन्थीले शरीरभित्रै पैदा गर्ने वा आफ्नै चाहनाले बाहिरबाट लिइने हर्मोनको प्रभावले यौनभूमिका निर्धारण गर्छ । यसलाई रोग वा अप्राकृतिक व्यवहारका रूपमा बुझनु गलत हो ।
अन्तरलिङ्गी बच्चाहरू महिला या पुरुष के हुन् भनेर चिन्न शरीरका बाहिरी अंग हेर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । उनीहरूको लिङ्ग निर्धारणमा त्योभन्दा ज्यादा जिम्मेवार र महत्वपूर्ण अरू दुई आधार हुन्छन् । भित्री प्रजनन अंगका साथै क्रोमोजोमको संरचना र यौवनावस्थामा पुगेपछि शरीरका विभिन्न ग्रन्थीले निष्काशन गर्ने महिला वा पुरुष हर्मोन समेतले मात्र अन्तरलिङ्गी अवस्थामा जन्मेको कुनै बच्चाको यौन जीवन र पहिचान यकिन गर्न सकिन्छ । कतिपय त अझ् महिला वा पुरुष प्रष्टसँग छुट्टिने गरी एकथरी मात्र यौनाङ्गका साथ जन्मिएका व्यक्तिमा समेत उमेर पुगेपछि लैंगिक रूपमा विपरीत लक्षणहरू देखा पर्छन् । पुरुष अंग हुनेको डिम्ब उत्पादन तथा पाठेघरको विकास र महिला अंग हुनेको शुक्रकीट उत्पादन र अण्डकोषको विकास त्यसका केही उदाहरण हुन् । उनीहरूको भित्री प्रजनन अंग बाहिरी अंगको ठीक विपरीत भएका कारण यस्तो हुन्छ । त्यस्तै किसिमको शारीरिक जटिलता व्यहोर्दै पाँच वर्षअघि धुलिखेल अस्पताल आइपुगेका काभ्रेका एक जना अन्तरलिङ्गी अहिले काठमाडौंको वीर अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् । यद्यपि यस्तो हुनु स्वास्थ्यको समस्या नभई जन्मजात प्रकृति हो ।
छोरी ठानेर शल्यक्रियाबाट लिङ्ग र नाम निर्धारण गरिएको बच्चा हुर्केपछि दाह्रीजुँगा आउन सक्छ भने छोरो भन्ठानेर त्यही अनुसारको यौनाङ्ग र नाम तय गरिएको बच्चामा पछि गएर स्तन बढ्ने, महीनावारी हुने जस्ता शारीरिक परिवर्तनहरू देखिन सक्छन् ।
पुरुषबाट महिला बन्ने एक किसिमको सांस्कृतिक प्रतिज्ञा स्वरुप लिंग काटेका व्यक्तिलाई हिजडा भनिन्छ । हिजडा वर्गमा सामेल समुदाय नेपालको तराई र भारतमा चार हजार वर्ष अघिदेखि नै रहँदै आएका छन् । हिजडाहरू पनि तेस्रोलिङ्गी नै हुन् तर सबै तेस्रोलिङ्गी हिजडा होइनन् । किनभने हिजडा धार्मिक विश्वास र सांस्कृतिक प्रतिज्ञाले जन्माएको समुदाय हो । पिंगला अर्थात् शिव शक्तिको आधा पुरुष तथा आधा महिला (अर्धनारीश्वर) को रूप लिएको ठान्ने हिजडाहरू आफूलाई पवित्र मान्दछन् । हिजडा हुन चाहने पुरुषले उनीहरूको समुदायमा सामेल भई महिलाको भेषमा उठबस गर्न‘पर्ने, उठेर पिसाब गर्न नहुने लगायतका विभिन्न नियम तथा अनुशासन पालनाको पूर्वअभ्यास गर्नुपर्छ । तोकिएका नीतिनियम तथा अनुशासनहरू कडा रूपले पालना गर्न सक्ने व्यक्ति मात्र लिंग काटी पूर्णरूपमा हिजडा हुन पाउँछन् ।
समलिङ्गीयता र समाज
यौनिक रूपले समलिङ्गी पहिचान बोकेका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूमा पनि विपरीतलिङ्गीमा जत्तिकै कामवासना हुन्छ । तर समान लिङ्गका यौनसाथीप्रति आकर्षित हुने स्वभावका कारण उनीहरू पुरुष भए पुरुषसँग र महिला भए महिलासँग नै विवाह गर्न चाहन्छन् । नेपालमा अहिलेसम्म समान लिङ्गका दुई व्यक्तिबीचको (समलिंगी) विवाहले कानूनी मान्यता भने पाइसकेको छैन ।
समलिङ्गी, द्विलिङ्गी वा तेस्रोलिङ्गी हुनु कुनै विकृति नभई व्यक्तिको स्वतन्त्र लैंगिक तथा यौनिक पहिचान भएकाले समाजले उनीहरूको सम्मान गर्नुपर्ने समाजशास्त्री डा. चैतन्य मिश्र बताउँछन् । उनी भन्छन्, “समलिङ्गी, द्विलिङ्गी, तेस्रोलिङ्गी वा अन्तरलिङ्गीबारे सुन्दा शुरूमा मलाई पनि अनौठो र अश्लील कुरा जस्तो लाग्थ्यो तर अहिले बुझेपछि त्यस्तो होइनरहेछ । यो त मानिसको प्राकृतिक विशेषता नै रहेछ ।” लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको पहिचान र आत्मसम्मानको माग गर्दै सरकार विरुद्ध परेको रिटमाथि २०६४ साल पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश अनुसार समलिङ्गी विवाहबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन गठित समितिमा डा. मिश्र पनि एक सदस्य थिए ।
पुरुष, महिला र तेस्रोलिङ्गी समुदायबाट समाजले राख्ने अपेक्षा अनुसारको छुट्टाछुट्टै सामाजिक भूमिका नै लैंगिकता (Gender) हो । अलग अलग लैंगिक पहिचान भएका व्यक्तिहरूले के कस्तो काम गर्ने भनी समाजले बनाएको मान्यताले व्यक्तिको लैंगिकता निर्धारण गरेको हुन्छ । तर यौनिकता नितान्त वैयक्तिक विषय हो । कुनै व्यक्तिमा विद्यमान कामवासना अथवा यौनक्रियाको अभिरुचिलाई नै ‘यौनिकता’ भनिन्छ जुन अंग्रेजी शब्द (sexuality) को नेपाली अनुवाद हो । अहिले संसारभर विविध खालका लैंगिक तथा यौनिक पहिचानको चर्चा हुने गरे पनि यसका मुख्यतया दुई हाँगा छन् । पहिलो, लैंगिकतामा आधारित पहिचान, जुन पूर्वीय दर्शन र सभ्यतामा आधारित छ र दोस्रो, यौनिकतामा आधारित पहिचान, जुन पश्चिमा दर्शन र सभ्यतामा आधारित छ ।
समलिङ्गी, द्विलिङ्गी, तेस्रोलिङ्गी वा अन्तरलिङ्गीबारे सुन्दा शुरूमा मलाई पनि अनौठो र अश्लील कुरा जस्तो लाग्थ्यो तर अहिले बुझेपछि त्यस्तो होइनरहेछ। यो त मानिसको प्राकृतिक विशेषता नै रहेछ ।
- डा. चैतन्य मिश्र, समाजशास्त्री
पूर्वीय दर्शन र सभ्यता अनुसार महिला, पुरुष र तेस्रोलिङ्गी वा तृतीय प्रकृति गरी तीन किसिमका लैंगिक पहिचान हुन्छन् । परापूर्वकालदेखि नै समाजले पुरुष र महिलालाई आपसमा विवाह गरेर गृहस्थ जीवन बिताउने भूमिका दियो । तर तेस्रोलिङ्गीहरूबाट समाजले त्यस्तो अपेक्षा राखेन । उनीहरूलाई शृङ्गार, नृत्य, कला, सजावट तथा चाडपर्व र मेला–उत्सवमा मनोरञ्जन दिलाउने, उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने र राजकाजमा सल्लाह दिने भूमिका दिइन्थ्यो । त्यस्ता तृतीय प्रकृतिका मानिसलाई पनि पूर्वीय सभ्यतामा निम्न पाँच प्रकारले विभाजन गरिएको छः
२) पुरुष नपुंसक (पुरुषकै भेषमा बस्ने वा पुरुष जस्तै देखिने नपुंसक)
विभिन्न शास्त्र र ग्रन्थहरूमा तृतीय प्रकृतिका मानिसहरूलाई अथ्र्याउनका लागि मात्र ५० भन्दा बढी शब्दहरू प्रयोग भएको पाइन्छ । यसले त्यस्ता मानिसहरू पौराणिक कालदेखि नै समाजमा स्थापित थिए भन्ने प्रमाणित गर्छ । शब्द आफैंमा नराम्रो नभए तापनि लामो समयदेखि होच्याउन प्रयोग हुँदै आएकाले ‘नपुंसक’, ‘हिजडा’ जस्ता शब्दहरूलाई अपमानजनक मानिन्छ । महिला र पुरुषभन्दा फरक लैंगिक तथा यौनिक पहिचान भएका मानिसहरूलाई बुझउन प्रयोग गरिने सबैभन्दा सम्मानजनक शब्दका रूपमा हिजोआज ‘तेस्रोलिङ्गी’ नै बढी प्रचलनमा छ ।
पश्चिमा दर्शन र सभ्यताले लैंगिक रूपमा मानिस पुरुष र महिला गरी दुई थरी मात्र हुने मान्यता राखेको छ । पाश्चात्य दृष्टिकोण अनुसार स्त्रीलिङ्गीका रूपमा जन्मेर पनि महिला बन्न नसक्ने वा पुलिङ्गीका रूपमा जन्मेर पनि पुरुष बन्न नसक्ने व्यक्तिले आफ्नो लैङ्गिकता बदलेर महिलाबाट पुरुष वा पुरुषबाट महिला बन्नुपर्छ । यस मान्यताले लिङ्ग (Gender) परिवर्तन गरी तेस्रोलिंगी (Transgender) बनेर भए पनि हरेक व्यक्ति महिला र पुरुष गरी दुईथरी लैंगिक संरचनाभित्रै बाँधिनुपर्ने अपेक्षा राख्छ ।
पश्चिमा देशहरूमा पनि बितेका दुई/तीन दशकयता लैङ्गिक पहिचानका विषयमा निकै बहस भएका छन् । फलस्वरुप ती देशहरूमा लैंगिक भूमिका बदलेका ‘ट्रान्सजेन्डर’ Transgender) र शारीरिक रूपमा नै शल्यक्रियाबाट लिङ्ग परिवर्तन गरेका ‘ट्रान्ससेक्सुअल’ (Transsexual) तथा त्यसखालका व्यक्तिहरूलाई बुझाउन समुच्चमा प्रयोग गरिने ‘क्वीर’ ९त्तगभभच० जस्ता शब्दहरूले स्वीकृति र सम्मान पाउन थालेका छन् । यौनिकताका विषयमा केही उदार देखिने पश्चिमा सभ्यतामा अहिले विश्वव्यापी मानवअधिकारका रूपमा यौनिकतामा आधारित लैंगिक पहिचान स्थापित हुँदै गएको छ ।
हिन्दू, बौद्घ र जैन धर्मग्रन्थहरूमा तेस्रोलिङ्गीलाई पाण्डक, किन्नरकिन्नरी, नपुंसक, नास्त्री, किंपुरुष आदि नामले उल्लेख गरेको पाइन्छ। वैदिक मान्यता अनुसार मानिसलाई तीन प्रकारले विभाजन गरिएको छ, पुंश प्रकृति, स्त्री प्रकृति र तृतीय प्रकृति ।
पहिचान र आत्मसम्मानका लागि संसारभर संघर्ष गरिरहेका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई नेपालको संविधान २०७२ ले प्रतिष्ठापूर्वक सम्बोधन गरेको छ । संविधानको धारा १२ मा प्रत्येक नागरिकले लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा १८ को समानताको हकमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक भएकै आधारमा विभेद गर्न‘हुँदैन भनिएको छ भने धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई समावेशी सिद्धान्त अनुसार राज्यका हरेक नीतिनिर्माण तहमा प्रतिनिधित्वको हक हुनेछ भनिएको छ । नेपालमा यो समुदायको पहिचानका लागि परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०६४ साल पुस ६ गते सरकारका नाममा दिएको निर्देशनात्मक आदेशलाई ऐतिहासिक मानिन्छ र छिमेकी देश भारत सहितका विभिन्न देशमा त्यो आदेशलाई नजिरका रूपमा समेत लिने गरिएको छ । भारतमा समलैंगिकतालाई अपराध मान्ने कानूनको दफा ३७७ खारेज गर्दा नेपालको सर्वोच्च अदालतको यही आदेशलाई उल्लेख गरिनु पछिल्लो उदाहरण हो ।
(पत्रकार दुलाल नेपालका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको विषयमा विशेष दक्खल राख्छन् ।)